Dalai Lama (ဒလိုင်းလားမား) – Lwin Htut Kyaw
ဒလိုင်းလားမားဆိုတာနဲ. လူတိုင်းပြေးမြင်တတ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တပါးပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၄ဆက်မြောက် his holiness “Tenzin Gyatso” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒလိုင်းလားမားဆိုတာနဲ. လူတိုင်းပြေးမြင်တတ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တပါးပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၄ဆက်မြောက် his holiness “Tenzin Gyatso” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မဟာယန ရဲ. အခွဲတခုဖြစ်တဲ့ တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ တိဘက် မွန်ဂိုးလီးယား တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း အိန္ဒိယပြည်နယ်တချိုု.မှာကိုးကွယ်ပြီး ဘူတန်နိုင်ငံရဲ. နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတင်ပြမဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ tulku (တူလ်ကူး) ဆိုတဲ့ ဘုရားလောင်း သို. ဘုန်းတော်ကြီးလောင်းလျာရွေးချယ်တတ်တဲ့ ဓလေ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ဗောဓိသတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အရင်ရှင်းရပါမယ်။ ထေရဝါဒမှာ ဗောဓိသတ်ဆိုတာဟာ ဘုရားအလောင်းတော် လို. အဓိပ္ဗါယ်ပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ မဟာယနမှာ ဗောဓိသတ်ကို ဘုရားအလောင်းအလျာလို.လဲပြန်သလို ဘုန်းတော်ကြီးလောင်းလျာ သို. ပါရမီရှင်လို.လဲ ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ဗောဓိသတ် သို. ဘုန်းတော်ကြီးလောင်းလျာကို တူလ်ကူး လို.ခေါ်တာပါ။ တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အဓိကဘုန်းကြီးကျောင်း ၆ ကျောင်းရှိပြီး သူတို.ရဲ.အစဉ်အလာနဲ. တရားသင်ကြားပုံ သင်ကြားနည်း ကလွဲ ကျောင်းကိုလိုက်ပြီးကွဲလွဲသွားပါတယ်။ အဲဒီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအတွက် လားမားတွေရွေးတဲ့အခါ ယခင်မူလ ပျံလွန်ခဲ့သော လားမားဆရာတော်ကြီးများရဲ. လူဝင်စား (တူလ်ကူး)တွေကို ရွေးချယ်ခန်.အပ်ကြပါတယ်။ မပျံလွန်ခင်တည်းက ဆရာတော်ကြီးများဟာ သူဘယ်မှာဝင်စားမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ပြီး hint ပေးထားတယ်လို.ဆိုပါတယ်။
အဓိကကျောင်းတော်ကြီး ၆ ကျောင်းကတော့
၆။ Bonpo လို.အမည်ရပါတယ်။
တကျောင်းနဲ.တကျောင်း ပါဝါချင်း မတူပါဘူး။ Gelug သို. Yellow hat ( ဦးထုပ်ဝါ လို.ပြန်ရမလားမသိ) ကျောင်းက ဆရာတော်ကြီးကတော့ ဒလိုင်းလားမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိဘက်ကို အုပ်ချုပ်ရတဲ့ ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပြီး တန်ခိုးသြဇာ ကြီးမားပါတယ်။ ခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ ၁၄ဆက်မြောက် ဒလိုင်းလားမားဟာ ၁၃ဆက်မြောက် ဒလိုင်းလားမားရဲ. လူဝင်စားဖြစ်တယ်လို. ဆိုပါတယ်။ဒီတော့ လူဝင်စားတွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ပါသလဲ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ သက်ကြီးဝါကြီး စီနီယာ လားမားများက နည်းအမျိုးမျိုးကို သုံးပြီးလူဝင်စားကိုရှာဖွေကြပါတယ်။ တနည်းကတော့ တိဘက်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ရေကန် Lake Lhamo La-tso ကိုသွားကြပါတယ်။ ရေကန်မှာတရားထိုင်ရင် ရေကန်စောင့်နတ်သမီး Palen Lhamo က တခါတလေ ဆရာတော်အလောင်းအလျာရှိတဲ့ဖက်တွေကို ပြပေးတာ အိပ်မက်မက်တာစသည်ဖြင့် နိမိတ်ပေးတတ်တယ်လို.သိရပါတယ်။ ဆရာတော်များကို မီးရှို.သဂြိုလ်တဲ့အချိန်မှာလဲ မီးခိုးငွေ.တွေသွားရာဖက်စသည်ဖြင့် အတိတ်ကောက်ကြရပါတယ်။ အဓိကကတော့ အိမ်မက်ပေးတာကို အားကိုးကြပါတယ်။
အတိတ်နိမိတ်များကောက်ပြီး လားမားဝင်စားတယ်လို.ထင်ရတဲ့ လူငယ်လေးများကို တွေ.တာနဲ. ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခေါ်လာပြီး တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ. စမ်းသပ်ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အရင်ဆရာတော်ကြီးများပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အသုံးအဆောင်များကို ခင်းကျင်းပြသပြီး နောက်ဆုံးကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဆရာတော်ရဲ. ပစ္စည်းကို ရှာခိုင်းတာပါ။ မှန်အောင် ရှာနိုင်တဲ့လူ ၁ ဥိးထက်များရင်တော့ ကျောင်းခြောက်ကျောင်းစလုံးက ဆရာတော်တွေပင့် အစိုး၇အရာရှိများပါပင့်ပြီးတော့ မဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်တဲ့။ လက်ရှိ ဒလိုင်းလားမားကတော့ သူ လူဝင်စားဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ် နောက်ဆုံဒလိုင်းလားမားဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်သွားမယ်လို.ပြောထားပါတယ်။ တူလ်ကးူက မိန်းခလေးရော ယောကျ်ားလေးပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်လာရင် မိန်းခလေးအဖြစ်နဲ.ပြန်လာနိုင်တယ်လို. လဲ ပြောထားတာရှိပါတယ်။
လောလောဆယ်အချိန်ထိတော့ မိန်းခလေး ဝင်စားတာ မရှိသေးပါဘူး။ တူလ်ကူးတွေရှာတဲ့အချိန်မှာ များသောအားဖြင့် တိဘက်က ရှာကြတာများပေမဲ့ ခု တိဘက်တန်ဘာသာ ပြန်.ပွားလာသည်နဲ.အမျှ အနောက်တိုင်းတွေမှာပါ တူလ်ကူးတွေ တွေ.လာရပါတယ်။ ၁၄ဆက်မြောက် ဒလိုင်းလားမားဟာ လားမားများထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံး နိုဘယ်ဆုရ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကို ခရီးအနှံ.အပြားသွားလာရပြီး အနောက်တိုင်း အယူအဆများနဲ.လဲ ရင်နှီးတဲ့ ပညာတတ် တဦးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဒလိုင်းလားမားဖြစ်နိုင်တယ် လို. ပြောပုံအရ သိပ္ဗံပညာနဲ. ဆန်.ကျင်နေတဲ့ rebirth reincarnation စတာတွေကို လက်သင့်မခံချင်လို.များလားလို. စိတ်ထဲကတွေးမိပါတယ်။ မိန်းခလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို. ပြောပုံထောက်ရင် အမျိုးသမီးတွေကို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးချင်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒလိုင်းလားမား ပျံလွန်သွားတဲ့အခါ နောက်ဘယ်သူဆက်ခံမလဲ ကမ္ဘာမှာကော နာမည်ကြီးပါအုံးမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
← နွားကို ချောက်ထဲတွန်းချလိုက်ပါ
Guide for Mon Languages →